Izinsiza Zezithombe kuRealtyWW
Uhlu Lwezakhiwo: Isiqondisi sebhizinisi Izinsizakalo Zokudweba
Thina kwa-LSK Drones sinikezela ngezinsizakalo zethu ngezidingo zakho, noma yini oyidingayo. Sisebenzisa i-drone entsha sha yokuthwebula izithombe zebhizinisi lobuchwepheshe ukuthola izithombe namavidiyo we-drone amangalisa ngebhizinisi lakho. Siphinde futhi sinikeze i-Creative Drone Photography kanye ne-Commerce Drone Photography ngenani elifanele.
buka Izinsizakalo Zokudweba eshicilelwe Izinyanga 3 edlule
Ukusakazwa kwezindaba ezaziwa kakhulu ngabathengisi bemakethe. Isetshenziselwa indlela evulekile nokuxaka, ibhizinisi, amandla nemvelo, ukuzijabulisa kwasekhaya nemidlalo, inqubomgomo yomphakathi kanye nentshisekelo.
buka Izinsizakalo Zokudweba eshicilelwe iminyaka 2 edlule
Photography yisayensi, ubuciko, ukusetshenziswa kanye nomsebenzi wokudala izithombe eziqinile ngokuqopha ukukhanya noma eminye imisebe kagesi, kungaba nge-elektroni ngenzwa yesithombe, noma ngamakhemikhali ngezinto ezibonakalayo ezikhanyayo njengefilimu yezithombe.  Ngokuvamile, Ilensi isetshenziswa ukugxila ukukhanya okukhonjiswayo noma okukhishwe ezintweni kufakwa isithombe sangempela endaweni ebonakalayo ukukhanya ngaphakathi kwekhamera ngesikhathi sokuchayeka ngesikhathi. Nge-sensor yesithombe se-elekthronikhi, lokhu kukhiqiza ishaji kagesi kuphikseli ngayinye, ecubungulwa nge-elektroniki futhi igcinwe kufayela lesithombe ledijithali ukuze liboniswe noma licutshungulwe. Umphumela nge-emulsion enezithombe isithombe esingabonakali esivele kamuva, kamuva "sakhiwa" ngamakhemikhali isithombe esibonakalayo, kungaba simbi noma sihle kuye ngezinhloso zezinto zokuthwebula nezindlela zokucubungula. Isithombe esingesihle kwifilimu ngokwesiko sisetshenziselwa ukwenza isithombe esihle esisekelweni sephepha, esaziwa ngokuthi ngumbhalo wokuphrinta, kungaba ngokusebenzisa okuandisa noma ngokushicilelwa kokuxhumana. I-Photograph isetshenziswa emikhakheni eminingi yesayensi, ukukhiqiza (isb., I-photolithography), nebhizinisi, kanye nokusebenzisa kwayo ngqo ubuciko, amafilimu nokukhiqiza ividiyo, izinjongo zokungcebeleka, umdlalo wokuzilibazisa, kanye nokuxhumana ngobuningi.